Wasiirro ka hadlay Booqasho ay ku tageen Degmooyinka Gobolka Gabiley | FooreNews
Home wararka Wasiirro ka hadlay Booqasho ay ku tageen Degmooyinka Gobolka Gabiley
Wasiirro ka hadlay Booqasho ay ku tageen Degmooyinka Gobolka Gabiley
fooreApr 07, 2012wararka0
Hargeysa (Foore)- Wefti uu hoggaaminayay Wasiirka Arrimaha dibadda Somaliland Md. Maxamed Cabdilaahi Cumar, oo ay weheliyeen Wasiirradda Maaliyadda Md. C/Casiis Maxamed Samaale iyo Wasiirka warfaafinta iyo wacyi-gelinta Md. Cabdi Yuusuf Ducaale (Boobe) ayaa maanta ka booqasho ku tagay magaalooyinka Arabsiyo, Gabiley iyo Kala-baydh ee gobolka Gabiley.
Wasiirka Arrimaha dibadda Somaliland Dr. Maxamed Cabdilaahi Cumar oo galabta u waramayay shabakadda wararka ee Somaliland.Org, ayaa sheegay in ujeedada socdaalkoodu la xidhiidhay is barashada Maamulka gobolka Gabiley iyo labada Wasiir ee cusub ee Maaliyadda Iyo Warfaafinta.
Wasiirku waxa kale oo uu tilmaamay in ujeedada socdaalkooda ay qeyb ka ahayd sidii ay u kuur-geli lahaayeen baahiyaha degmooyinka Gobolka Gabiley.
“Ujeedada socdaalkayagu waxay la xidhiidhay sidii aanu u darsi lahayn xaaladda guud ee deegaamadda gobolka Gabiley iyo baahiyaha horumarineed ee gobolkaasi u baahan yahay. Waxa kale oo socdaalkayagu qeyb ka ahaa sidii ay isu baran lahaayeen Maamulka degmooyinka gobolka iyo Wasiirradda cusub ee Maaliyadda iyo Warfaafinta,”ayuu yidhi Dr. Maxamed Cabdilaahi.
Wasiirku wuxuu sheegay inay kulamo is xog-waraysi ah ay la yeesheen maamulka degmooyinka Arabsiyo, Gabiley, Kala-baydh iyo Wajaale , kuwaasi oo uu tilmaamay inay weftiga u soo bandhigeen baahiyaha ka jira degmooyinkaasi iyo mashaariicda dhinaca horumarinta ee ka socda Gobolka Gabiley.
Wasiirka Arrimaha dibadda oo aanu weydiinay qodobadii loo soo bandhigay weftiga iyo baahiyaha ugu daran ee ka jira degmooyinka Gobolka Gabiley, waxa uu yidhi “Baahiyo badan ayaa ka jira degmooyinka gobolka Gabiley, waxyaabaha aan ka xusi karo waxa ka mid ah Dooxa Degmadda Arabsiyo oo balaadhay isla markaana xili roobaadkan halis gelin kara inuu daadku qaado 300 oo beerood oo ku yaala degmadaasi iyo guryo tiro badan oo ka dhisan dooxa dhinaciisa.”
“Waxa kale oo maamulka degmada Wajaale ay soo bandhigeen baahiyo badan oo ay ka mid tahay in laga taageero hagaajinta jidadka magaaladda iyo adeegyadda kale ee bulshadda,”ayuu yidhi Wasiirka Arrimaha dibaddu.
Wasiirku wuxuu tilmaamay in magaaladda Gabiley ay masuuliyiintii iyo waxgaradkii ay la kulmeen u soo bandhigeen baahiyo la xidhiidha dhinaca biyaha iyo nidaaminta jidadka magaaladaas.
Dr. Maxamed Cabdilaahi waxa uu tilmaamay in qodobadii ay u soo bandhigeen masuuliyiintii ay la kulmeen ay u gudbin doonaan xukuumadda Somaliland.
Wasiirka Arrimaha dibaddu waxa kale oo uu ku dooday inay gobolka Gabiley ay ku soo arkeen mashaariic badan oo laga fuliyay kuwaasi oo ay ka mid yihiin xarumo dawladeed oo laga dhisay, wadooyin cusub oo la sameeyay iyo kuwo kale oo la dayactiray.
Sadexdan Wasiir waxay isla galabta ku soo laabteen magaaladda Hargeysa ee caasimadda Somaliland.
Previous PostXaflad loogu dabaal-degay sanad guuradii 30-aad ee aasaaskii SNM oo lagu qabtay Berbera Next PostD/Hoose Hargeysa oo Shirkadda Dhis Ka wareejisay khashin ururintii Gacan-libaax iyo 26 June